Brilliance Mansion ကွန်ဒိုသည် မင်းရဲကျော်စွာလမ်း ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် Singapore Yao Hua Group Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားသည်။ ရန်ကုန်မြို့၏အဓိက CBD ဧရိယာတွင် တည်ရှိနေသောကြောင့် ကောင်းမွန်သောလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် အထောက်အပံ့များဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသော ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်...
ကလောမြို့ရှိ Kalaw Haven လုံးချင်းအိမ်ရာ
Kalaw Haven သည် ကလောမြို့ ပင်မကုန်း ၊ နှီးဘုရားအနီးတွင် တည်ရှိသည်။၂ ထပ်လုံးချင်းအိမ်ရာများဖြစ်ပြီး ဂရန်အမည်ပေါက်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Decoration အပြည့်အစုံပါဝင်ပြီးခြံစည်းရိုးခတ်ပေးမည်။ Kalaw Haven ၏ထူးခြားချက်များ - Kalaw Haven ရှိအိမ်ဒီဇိုင်းများသည် Tudor(တူဒိုး) စတိုင်...
ဘန်ကောက်ရှိ Maestro 03 ကွန်ဒို
Maestro 03သည်322/81 Ratchadaphisek 3, Khwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Krung Thep Maha Nakhon 10400 တွင်MJD (Major development Pcl.) မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ပါသည်။ (၈)ထပ်အမြင့်ရှိပြီး အဆောက်အဦး (၃)ခု ၊ Unitsပေါင်း (320) ပါဝင်သည်။ အခန်းအမျိုးအစားများ 1 Bedroom -29.00 sqm to 41.38 sqm2Bedroom -57.24 sqm to 66.10 sqm ပါဝင်သည့် Facilities များ - Elevator- CCTV- Gym- Parking- Swimming Pool- Garden / BBQ- 24 hours...
The Reach Cond သည် Soi Phahon Yothin 52 Yaek 48, Khlong Thanon, Sai Mai, Bangkok 10220, Thailand တွင်တည်ရှိပြီး Pruksa Real Estate Public Company Limited မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်သည်။ တက္ကသိုလ် ၊ ဆေးရုံ ၊ လေဆိပ် တို့ အနီးတွင်တည်ရှိပြီး ကွန်ဒို Facilities ပြည့်စုံစွာပါဝင်သည်။ Building Information - 8 Stories -6Buildings Room Types One Bedroom 28-30 square...
A Space Me 77 ကွန်ဒိုသည် ဘန်ကောက်မြို့ Sukhumvit လမ်းမပေါ်ရှိ ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည်။ ဈေး ၊ ကျောင်း ၊ ဆေးရုံ ၊ ဘဏ်များ အနီးတွင်တည်ရှိသည်။ 100%ဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ အသင့်နေနိုင်သည်။ A Spce Me Condo ၀ယ်ယူသင့်သည့်အချက်များ - အဝါရောင်MRT Sri Nut နှင့်အနီးဆုံးရှိသည့်အတွက်...
ကလောမြို့ရှိ Hill Top Villa Residence
Hill Top Villa Residence သည်ကလောမြို့၏ ရှုခင်းအလှဆုံး အထင်ကရဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သောတောင်ပေါ်ရှုခင်းသာဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Hill Top Villa Hotel နှင့်တစ်စပ်တည်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ၀ယ်ယူသူဂရန်အမည်ပေါက် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Building Information Walling 4.5 Thick Brick walling with 1:1:6, Composit Conc; Door & Window Hard wood Chowket Teak wood Door and...
Har Khar Villa - ဟားခါးလုံးချင်းအိမ်ရာစီမံကိန်း
Har Khar Villa (ဟားခါးလုံးချင်းအိမ်ရာ) သည် Myotha National Golf Club ဝန်းအတွင်းတည်ရှိပြီး Mandalay Myotha Industrial Development (MMID) မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားသည်။ Myotha National Golf Club သည် အာရှတိုက်၏ အကောင်းဆုံးဂေါက်ကွင်း တစ်ခုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံးဂေါက်ကွင်း ဖြစ်ပြီး Asia Pacific Golf Tourism Pioneer Award နှင့် Asian Golf Award 2018...
FYNN Asoke Project ကို ဘန်ကောက်မြို့ Soi Sukhumvit 10 တွင် FYNN DEVELOPMENT CO.,LTD မှ တာဝန်ယူဆောက်လုပ်နေပါသည်။ အဆောက်အဦးအမျိုးအစားအပူပိုင်းဒေသများတွင် ဆောက်လုပ်လေ့ရှိသည့် ခေတ်မီဗိသုကာလက်ရာ စိတ်ကူးစိတ်သန်း များဖြင့် မြို့ပြတွင် လိုအပ်သည့် သဘာဝတရားကိုအသားပေး ပုံဖော်ဆောက်လုပ်မည့်...
Lanmadaw River View Tower သည် 544/546 ၊ ကမ်းနားလမ်း ၊ လမ်းမတော်မြို့နယ် တွင် M.M.M Construction မှ ဆောက်လုပ်ထားပါသည်။ Lanmadaw River View Tower ၏အားသာချက်များ- ရန်ကုန်မြို့၏ စီးပွားရေးအချက်အချာကျသော Downtown မြို့နယ်ဖြစ်သော လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိခြင်း။- ရန်ကုန်မြစ်၏ River View ဖြစ်ပြီး...
M Suite Residence
အမှတ် - ၆၂ ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် တာဝတိံသာလမ်းထောင့် ၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တွင် Salomon Myanmar Co.,Ltd. မှ တည်ဆောက်ထားသည်။အဆောက်အဦးအား ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်စေရန် Pile Foundation ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားပါသည်။ အခန်းအကျယ်အ၀န်း 400 sqft မှ 1100 sqft အထိ နှင့် ဆိုင်ခန်းအကျယ်အ၀န်း 935 sqft မှ 1760 sqft အထိ 1 Bedroom ၊2Bedroom ၊ 3...